Jose Mourinho Oo Aan Waxba Ula Hadhin Solskjaer: "Waa Aabe Xun... Son Wuu Nasiib Badan Yahay Sababtoo Ah Wuxuu Haystaa Aabo Ka Fiican Ole.." - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJose Mourinho Oo Aan Waxba Ula Hadhin Solskjaer: “Waa Aabe Xun… Son Wuu Nasiib Badan Yahay Sababtoo Ah Wuxuu Haystaa Aabo Ka Fiican Ole..”
Jose Mourinho Oo Aan Waxba Ula Hadhin Solskjaer: “Waa Aabe Xun… Son Wuu Nasiib Badan Yahay Sababtoo Ah Wuxuu Haystaa Aabo Ka Fiican Ole..”
April 12, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa weerar ku qaaday dhiggiisa Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer, waxaanu ku tilmaamay in uu yahay ‘aabo xun’.
Manchester United ayaa xalay guul 3-1 ah kasoo gaadhay Tottenham oo ay waliba ka daba-timid, waxaana kulankan hadheeyey go’aankii VAR ee United lagaga diiday goolka, taas oo ay dood ka keeneen khubrada ciyaaruhu.
Kaddib ciyaartan, Tottenham ayaa ku negaatay kaalinta toddobaad ee miiska kala-sarraynta, iyadoo ay gabaabsi sii noqonayso fursaddii ay ku raadsanaysay in ay kaalinta afraad ku iman karto.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa dareen gagood ah ka muujiyey goolkii VAR ee garsoore Craig Pawson oo VAR fadhiyey iyo Chris Kavanagh ay iskugu waafaqeen in McTominay uu qalad kusii galay Son ka hor intii aanu dhiibin kubaddii goolka uu u beddelay Cavani, sidaasna ay meesha kaga saareen.
Ciyaarta kaddib ayuu Solskjaer weeraray Son oo uu tilmaamay in uu illaa saddex daqiiqadood dhulka jiifay, waxaanu yidhi: “Ciyaartu way dhamaatay, kulankuna wuu socday. Waxa aan leeyahay, haddii wiilkaygu uu dhulka jiifo saddex daqiiqadood oo uu caawimo uga baahan yahay tobanka ciyaartoy ee kale ee garoonka kula jira, wax cunto ah ma helayo.”
Jose Mourinho ayaa ka jawaabay hadalkaas, waxaanu Ole Gunnar Solskjaer ku tilmaamay aabbe xun, isagoo tixraacaya kalmadihii uu adeegsaday iyo tusaalihii uu daliilka ka dhigtay.
Mourinho ayaa yidhi: “Sonny (Heung-min Son) aad ayuu u nasiib badan yahay, sababtoo ah wuxuu haystaa aabo ka wanaagsan Ole. Sababtu waxay tahay, aabbuhu waa in uu mar walba quudiyo carruurtiisa wax kasta oo ay sameeyaan, xataa haddii ay kugu qaadato in aad cunto usoo xaddo carruurtaada, waad usoo xadaysaa.
“Aad iyo aad ayaan u niyad-jabsanahay, waanan u sheegay Ole sida uu hadalkiisu iigu dhadhamay. Aad ayaan ula yaabay. Anigu waxaanu nidhaahnaa haddii aanu nahay reer Portugal, roodhigu waa rooddhi, is-mariskuna waa is-maris. Mar horeba waan u sheegay Ole waxa uu hadalkiisu iila ekaaday.”